Zụta obere laptọọpụ ekwentị ekwentị na - adaba njide - Mbupu n'efu & Enweghị &tụ | WoopShop®
Portable Laptọọpụ Side ekwentị adaba njide
Portable Laptọọpụ Side ekwentị adaba njide na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
:Dị: Akụ Ngwá Ọrụ Aka
Ihe: Plastic, ABS
Net arọ: 90G
Ejiri ngwusi: 109G
Ojiji: N'onwe Gị Home
Nwee ihuenyo abụọ ozugbo: Kpoo nke a na nsọtụ laptọọpụ gị ka ịchekwa ekwentị gị ma dịkwa mfe ịnweta. Ọ dị mma ka gị na mmadụ kparịta ụka na vidiyo mgbe laptọọpụ gị na-arụ ọrụ ndị ọzọ.
Kemeghi ugwu: N'ihi na ya n'usoro imewe nwere ike imeghari ka otutu ọnọdụ, ọ nwere ike inye ezigbo ikiri n'akuku na ngwaọrụ ihuenyo. You nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nwụnye dịka ọ masịrị gị ma debe ya n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri nke ihuenyo ahụ.
Dabara Ọtụtụ Ekwentị & ndị nlekota: Ọhụrụ ekwentị na ndị mbadamba ụrọ, ya na obere vidiyo na ngwa mgbakwunye ndị ọzọ, nwere ike ịmegharị n'ụzọ dị mfe n'ụdị dị iche iche na azụ. Mpempe akwụkwọ silicone a na-ewepu ewepu na-eme ka ọ dị mma karịa na oke nke oke dị iche iche, ọ dịkwa mma maka ntinye na nseta na mpaghara ndị ọzọ.
Na-adaba adaba: Ọ dị mfe iji wụnye na iji, ma dịkwa mfe ịnweta ekwentị mkpanaaka gị; Ọ dị mma maka ikiri vidio nkuzi, gị na onye ọrụ ibe gị na-akparịta ụka, ma nwee ike itinye uche na ọrụ gị. Na-eme ka ịrụ ọrụ ma ọ bụ ịmụ ihe dị mfe!
Laptọọpụ Side Phone njide × 1/2/4
Ndị ahịa weere anyị 5.0 / 5 dabeere na nyocha 73031.